Guddoomiyihii hore ee Nairobi oo mar labaad xabsiga loo taxaabay - Halbeeg News
in Caalamka, Soomaaliya, War Degdeg, Xulka
NAIROBI (HALBEEG) – Dowladda Kenya ayaa mar labaad xirtay guddoomiyihii hore ee gobolka Nairobi Evans Kidero, kaas oo loo haysto eedaymo la xiriira musuq maasuq iyo wax isdaba marin.
Booliska iyo saraakiil ka tirsan Hay’adda Anshaxa iyo Ladagaalanka Musuq naasuqa ee Kenya (EACC) ayaa baaritaan ku sameeyey guriga Mr Kidero oo ku yaalla xaafadda Girgiri, iyagoo isagana baritaanka kaddib horay usii kaxeeyey.
“Booliska ayaa gurigeyga baaritaan ku sameeyey iyaga oo caddeyn raadinaya, waxay u muuqataa inaysan wax caddeyn ah igu heli doonin. Waxay ahayd in marka hore caddeymo la igu xiri kari la keeno” ayuu yiri.
Guddoomiyihii hore ee Nairobi Evans Kidero, iyo mas’uuliyiin kale oo ay horay usoo wada shaqeeyeen ayaa lagu soo eedeeyey in muddadii u dhexesey January 2014 ilaa January 2016 ay lunsadeen lacag dhag 13 milyan oo Shilinka Kenya ah.
Bishii August ee lasoo dhaafay ayey ahayd markii sidan oo kale Mr Kidero xabsiga loogu taxaabay, inkastoo muddo kooban kaddib dammaanad lagu soo daayey.
Qoysas Soomaali ah oo ku go'doonsan gobolka Oromada
Wasaaradda Caafimaadka oo la wareegaysa dhammaan isbitaallada dalka